मदिराजन्य पदार्थको राजस्व सवैभन्दा बढी | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ मदिराजन्य पदार्थको राजस्व सवैभन्दा बढी
on: ११ बैशाख २०७६, बुधबार ११:३५ प्रदेश ०३, प्रदेश समाचार
ढुवानी सहज हुँदा देशकै मध्यभाग चितवनमा मदिराजन्य उद्योग खुल्ने क्रम बढ्दो
वैशाख ११, चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा संकलन हुने राजस्वको अधिकांश हिस्सा मदिराले धान्ने गरेको छ । चितवन र नवलपुर जिल्ला हेर्ने यस कार्यालयमा संकलन हुने राजस्वको ८७ प्रतिशत हाराहारी वियर र मदिराको हुने गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म संकलन भएको कूल राजस्व रू. २० अर्ब ४ करोड ७० लाख ८६ हजारमध्ये रू. १७ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख ४१ हजार अन्तःशुल्कको रहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी धनेश्वर अर्यालका अनुसार वियर र मदिराबाहेक कोकाकोला, साबुन, सरफ, सुर्ती, रंगलगायतको एक प्रतिशत हुने भए पनि अरु सबै अन्तःशुल्क मदिराजन्य पदार्थको हो । ती उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरलगायतको राजस्व ठूला करदाता कार्यालयमा तिर्दै आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको चैत महीनासम्ममा सो कार्यालयले रू. १४ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन गरेकामा रू. १२ अर्ब ४१ करोड १६ लाख अन्तःशुल्कको रहेको थियो । अर्यालका अनुसार चितवनमा तीन वियर उद्योग छन् भने नवलपुरमा दुई रहेका छन् । त्यसैगरी तीन मदिरा उद्योग चितवनमा छन् भने चार नवलपुरमा रहेका छन् । कूल संकलन भएको अन्तःशुल्कमध्ये मदिराको भन्दा वियरको बढी हुने गरेको अर्यालले बताए ।
नेपालमा नै वियरमा सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्क तिर्ने गोर्खा ब्रुअरी यसै कार्यालय अन्तरगत पर्दछ । त्यसैगरी यति, माउण्ट एभरेष्ट, शेर्पा र सिजी ब्रुअरीले यसै कार्यालयमा अन्तःशुल्क बुझाउँदै आएका छन् । मदिरातर्फ यति, मनकामना, देवचुली, श्री, युनाइटेड, सुमी र रोलिङ लिभर डिस्टिलरी यसै कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । ती कार्यालयले अन्तःशुल्क यहाँ बुझाउँछन् भने अन्य कर ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउने गर्दछन् ।
कार्यालयका प्रमुख सुवप्रसाद रिजाल अन्तःशुल्कको रकम ठूलो हुँदा अन्य क्षेत्रको राजस्व कम देखिएको भए पनि बढ्दो मात्रामा रहेको बताउँछन् । मदिराजन्य उद्योगले अन्तःशुल्क बढाउँदै लगेको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको राजस्व पनि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
कार्यालय दायरा फराकिलो पारेर राजस्व बढाउने अभियानमा लागिपरेको उनले बताए । देशकै मध्यभाग भएकाले ढुवानीका लागि सहज हुने हुँदा मदिराजन्य उद्योगसँगै अन्य उद्योग खोल्नका लागि यस क्षेत्र उपयुक्त देखिएको छ । मदिराजन्य र अन्य उद्योग खुल्ने क्रम पनि जारी रहेको रिजालले बताए । रासस
टुबोर्गसँग क्लिन ब्यान्डिटको सांगीतिक सहकार्य
२२ बैशाख २०७६, आईतवार ०९:०१
७ बैशाख २०७६, शनिबार १५:२८